थाइल्याण्डबाट नेपाली विद्यार्थीकाे आग्रह : सबै नियम मान्छाैँ, घर फर्काइदेऊ
नवराज कुँवर काठमाडाैं, ३ जेठ
पूरै विश्व अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीसँग जुधिरहेको छ । यो रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विश्वका धेरैजसो देशमा लकडाउन गरिएको छ । कतिपय देशले सामाजिक दूरी, सरसफाइजस्ता उपायबाट कोरोना भाइरसको प्रसारलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यस्तै देशमध्ये एक हो थाइल्याण्ड ।
थाइल्याण्डमा आज अर्थात् १६ मेसम्म ३ हजार भन्दा बढी मानिसमा कोभिड–१९ को संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
विश्वमा सबैभन्दा बढी पर्यटक भित्रिने मुलुकहरूको सूचीमा रहेको थाइल्याण्डमा घोषित लकडाउन त छैन तर, सामाजिक दूरीको उपाय कडाइका साथ लागू गरिएको छ । जसले गर्दा विश्वभरका मानिस भेला हुने मुलुकमा संक्रमितको संख्या कम छ । नयाँ केसहरू पनि खासै बढेको छैन ।
नेपालीहरू घुम्न, पढ्न, व्यापार गर्न, ट्रान्जिटका लागि थाइल्याण्ड पुग्ने गरेका छन् । कोभिड–१९ को प्रकोप सुरू भएपछि थाइल्याण्डमा नेपालीहरूको स्थिति के छ ?
काम गरेर खाने, विद्यार्थी, बिरामीहरू कसरी बसिरहेका छन् ? यसबारे गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएन थाइल्याण्डका अध्यक्ष आस्सजित अवालेसँग राखिएकाे जिज्ञासामा उनले यसाे भनेका छन् :
आस्सजित अवाले,अध्यक्ष, गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) थाइल्याण्ड
अहिलेसम्म थाइल्याण्डमा ३ हजार २५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । यीमध्ये २ हजार ५४ जना निको भएका छन् भने ५७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ, यी सबै थाइ हुन् । कुनै पनि नेपालीमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण भेटिएको छैन ।
थाइल्याण्डमा घोषित लकडाउन छैन । तर, लकडाउन जस्तै गरी सामाजिक दूरीको उपायचाहिँ कडाइका साथ लागू गरिएको छ । सवारीसाधन, होटल, पार्क र कार्यालयहरू आंशिक रुपमा खुला गरिएको छ ।
मानिसहरू भेला हुने रेस्टुरेन्टहरू पूर्णतः बन्द छन् । खुला हावामा बसेर खानपान गर्न मिल्ने रेस्टुरेन्टहरूलाई भने सामाजिक दूरी कायम गरी सञ्चालन गर्न दिइएको छ । १७ मे अर्थात् भोलिदेखि ठूला सुपरमार्केट र डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू खुला गर्न दिने भनिएको छ ।
तर, यसरी खुला गरिने सुपरमार्केटले केही नियमको पालना गर्नुपर्ने छ । सीमित कर्मचारीले सीमित ग्राहकलाई दूरी कायम गरी सामान बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ । बिहान १० बजे डिपार्टमेन्टल स्टोर पुग्ने कर्मचारी राति ११ बजेभित्र घर फर्किइसक्नु पर्ने छ । १६ मे अर्थात् आजसम्म यस्ता कर्मचारीलाई अपरान्ह ४ बजेभित्र घर पुगिसक्नुपर्ने नियम छ ।
अहिले थाइल्याण्डको नाइट लाइफ भने ठप्प नै छ । कोभिड–१९ को संक्रमण खासगरी रातमा हुने व्यवसायबाटै फैलिन थालेपछि राति ११ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म कर्फ्यु लगाइएको छ ।
सार्वजनिक सवारी साधनहरू चलिरहेका छन् । यद्यपि, त्यहाँ पनि केही नियमहरू लगाइएको छ । जस्तो कि, बसको २ वटा सिटमा एक जना मात्र बस्न पाउने, ट्रेनमा दुई वटा सिट छोडेर बस्नुपर्ने ।
थाइल्याण्डमा डोमेस्टिक, इन्टरनेसनल उडानहरू ठप्प छन् । तर, चाटर्ड फ्लाइटहरू भने चलिरहेको छ । केही दिन अघिसम्म थाइ सरकारले विभिन्न देशमा रहेका आफ्ना नागरिक चाटर्ड गरी ल्याएको थियो ।
पछिल्लो समय यसरी ल्याइएका नागरिकमा मात्र कोभिड–१९ को संक्रमण देखिएको छ । १४ मे को दिन कसैमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको थिएन । तर, १५ मे मा एकैदिन ७ जना संक्रमिट भेटिएका छन् । उनीहरूलाई केही दिनअघि थाइ सरकारले पाकिस्तानबाट उद्धार गरी ल्याएको थियो ।
यसरी थाइल्याण्डमा कतिपय बिजनेस रन भइरहेको छ भने कोभिड–१९ रोकथामको प्रयास पनि भइरहेको छ ।
लकडाउन नगरिए पनि धेरै ठाउँमा लागू गरिएका नियमका कारण कतिपय बिजनेस ठप्प छन् । थाइल्याण्डमा होटल र रातको समयमा हुने व्यवसायमा संलग्न मानिसको संख्या धेरै छ । यस्ता मानिस ठूलो आर्थिक चपेटामा परेका छन् ।
यो एक महिनाभित्र सयौं थाइ नागरिकले आर्थिक समस्याका कारण आत्महत्या गरिसके । अझै केही दिन यस्तो स्थिति रहने हो भने आत्महत्या गर्नेको संख्या बढ्ने देखिन्छ ।
दिनभर काम गरेर साँझ हातमुख जोड्ने परिवार पनि यहाँ धेरै छ ।
थाइल्याण्डस्थित नेपाली राजदूतावासको तथ्याङ्कअनुसार यहाँ २ हजार ५ सय ८९ जना नेपाली छन् । यीमध्ये ११ सय विद्यार्थी हुन् । अहिलेसम्म कसैमा पनि कोभिड–१९ को संक्रमण पाइएको छैन ।
तर, काम बन्द हुँदा खासगरी सानोतिनो व्यवसाय गर्दै आएका नेपाली व्यवसायी र विद्यार्थी समस्यामा परेका छन् । यति मात्र होइन, म्यानपावरले विभिन्न प्रलोभन देखाएर ल्याएका दर्जनौं नेपाली अहिले चरम समस्यासँग जुधिरहेका छन् ।
समस्यामा परेका नेपालीले राजदूतावासलाई गुहारे पनि सहयोग पाएनन् । राजदूतावासले उनीहरूलाई आर्थिक सहयोग वा राहत उपलब्ध गराउन नसक्ने बताएपछि हामीले संस्थागत रूपमा दूतावासलाई आग्रह गरेर भन्यौं– यहाँ समस्यामा परेका नेपालीलाई राहत उपलब्ध गराऔँ, हामी सहयोग गर्छौँ, तपाईंहरू (एम्बेसी)ले नेतृत्व गर्नुपर्‍यो ।
तर, एम्बेसीले नमानेपछि समस्यामा परेका जति पनि नेपाली छन्, सबैलाई एनआरएन थाइल्याण्डले खानाको व्यवस्था गरिरहेको छ । यसका लागि हामीले तीन सदस्य ‘टास्क फोर्स’ नै बनाएका छौँ । मे महिनाको अन्तिमसम्म उनीहरू खाना उपलब्ध गराउने संस्थागत निर्णय गरेका छौँ । हामी अघि बढी सकेपछि एम्बेसीले पनि सहयाेग गर्न थालेकाे छ ।
होटेल म्यानेजमेन्ट पढ्न आएका विद्यार्थीलाई कतिपय होटलले इन्टर्नसिपबाट निकालिदिएका छन् । तर, सबै ठाउँ यस्तो छैन । कसैले राम्रै व्यवस्थापन गरी राखेका पनि छन् । तर, जो जो निकालिए उनीहरूको दैनिकी निकै कष्टकर छ ।
२८ जना विद्यार्थी फुकेट आइल्याण्डमा बस्छन् । यीमध्ये १९ जनालाई खान र बस्नको समस्या छ । यसैगरी, बैंककमा २४ र ५६ जनाको छुट्टाछट्टै २ समूह छ ।
पटाया सिटीमा होटल म्यानेजमेन्ट तालीम गराउन भनेर म्यानपावरले ल्याएर छाडेका दर्जनौं नेपाली छन् । उनीहरूको दैनिकी पनि कष्टकर छ ।
म्यानपावरहरूले विभिन्न देश लैजाने भनेर थाइल्याण्ड उतारेका नेपालीको संख्या पनि बढी नै छ । उनीहरू पनि खाना र बस्नकै समस्यासँग जुधिरहेका छन् ।
नेपाल फर्किने चाहना
नेपालबाट उपचार गर्न आएका तर फर्कन नपाएकाहरूलाई पनि मैले भेटेको छु । समस्या परेका यी सबै नेपाली स्वदेश फर्कन चाहन्छन् । नेपालमा सरकारले जुनसुकै नियम पालना गर भने पनि आफूहरू तयार रहेको उनीहरू बताउँछन् ।
जस्तो कि, नेपाल जानुअघि स्वास्थ्य परीक्षण, नेपाल पुगिसकेपछि क्वारेन्टाइन, त्यसपछि पुनः परीक्षणका लागि उनीहरू तयार छन् । सिर्फ घर जान चाहन्छन् । नेपाल सरकारले चाटर्ड फ्लाइटको अनुमति दिए पैसा आफैं तिर्न तयार रहेको बताइरहेका छन् ।
पैसा भएकाहरूले नभएकाहरूलाई सहयोग गरी चाटर्ड फ्लाइटको पैसा जुटाउँछौँ भनेर उनीहरूले आग्रह गरेपछि एनआरएन थाइल्याण्डले यहाँको एम्बेसी, कोराना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरी समितिका संयोजकसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली, एनआरएन आइसीसीका अध्यक्षलगायतलाई हामीले चिट्ठी पठाएका छौँ । अहिलेसम्म रेस्पोन्स आएको छैन । सरकारले उनीहरू उद्धार गरिदेओस्, हाम्रो पनि माग यही छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ३, २०७७, १३:२०:००